Abavelisi beebhegi zee Chef-abaThengi baseTshayina kunye nabaFundi baseTshayina
Ingca ethandwayo ye-Chef Hat Poly Cotton Wine Red Colour Chef Hat U402S0400A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U402S0400A Ubungakanani BUNYE SISE Amagama aphambili wokupheka umnqwazi I-65/35 poly / ikotoni GSM.235g I-Xinjiang Aksu yekotoni ende, akukho-pilisi, akukho kuncipha, akukho nto i-carcinogens, ubomi benkonzo amaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yompheki. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygrosco elungileyo ...
I-Poly Cotton White Chef Hat CU404S0200A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CU404S0200A Ubungakanani BUNYE SIZE Amagama aphambili wokupheka isigcina-ntloko Indwangu 65/35 iplashini / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu umtya omde omde, ongathathi pilisi, onganciphisiyo, ongenazifo zidalwa, inkonzo yobomi amaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yompheki. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygrosc elungileyo ...
I-Unisex Poly Cotton Imibala emnyama ye-Chef Hat U404S1200A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U404S1200A Ubungakanani S, M, L Amagama aphambili woku chesa umnqwazi Indwangu 65/35 isininzi / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu umtya omde womqhaphu, akukho-pilisi, akukho kuncipha, akukho zifo zenyama Ingubo yompheki. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopic elungileyo ...
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U405S8300H Ubungakanani BOKUQHELA Amagama aphambili okokupheka, umnqwazi wepheki ophetheyo, umnqwazi waseJapan Umgangatho / ikotoni Xinjiang Aksu umtya omde womqhaphu, akukho-pilisi, ukunganciphisi, ukungabinamali yenyama, ukubonelela ngenkonzo amaxesha ama-2 rhoqo njengesiqhelo. Ingubo yompheki. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, isiqu esisezantsi ...